Nabadda Buug-tilmaameedka Waxbarashada, Quotes & Memes - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Buug-tilmaameedka Waxbarashada Nabadda, Quotes & Memes
-Allen, DouglasArieta Cabrales, Alba LuzBaker, TauheedahBajaaj, MonishaBarbieto, CecileBekerman, ZviBrantmeier, Edward J.Boal, AugustoBoulding, EliseCabezudo, AliciaCascón, PacoDewey, JohnFreire, PauloGaltung, JohanGandhi, MahatmaOlolaha Caalamiga ah ee Waxbarashada NabaddaGreene, MaxineHaavelsrud, MagnusHaajir, BasmaHicks, Davidqabatooyin, dawanHudgins, JanetIkeda, DaisukuJenkins, TonyKester, KevinKing Jr, Martin LutherLederach, John PaulLough, DerekMartínez Guzman, VincentMcCarthy, ColemanMeier, DeborahModi, Chinta GirishMontessori, MariaNario-Galace, JasminNavarro-Castro, LoretaNoddings, NelBogga, James S.Paul II, Pope JohnDiidmada, BettyRotblat, YuusufSnauwaert, DaleTibbits, FelisaVerma, RitaZembylas, Michalinos
Qoraha (yada) Basma Haajir & Kevin Kester
Waxbarashada nabadda ee halista ah (CPE) waxay dooneysaa inay carqaladeyso xiriirada awoodda asymetrical iyo inay xirxirto xididdada siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo taariikh.
Qoraha (yada) maro jilbaha
Fasalka, oo leh dhammaan xaddidaaddiisa, ayaa weli ah goobta suurtogalka ah. Goobtaas suurtogalka ah waxaan haysanaa fursad aan ku shaqeyno xorriyadda, si aan u dalbano nafteena iyo asxaabteena, furfurnaan maskaxeed iyo qalbi noo ogolaanaya inaan wajahno xaqiiqda xitaa marka aan si wadajir ah u qiyaasno siyaabo aan uga gudubno xuduudaha, si aan u gudubno. Tani waa waxbarashada sida ku dhaqanka xorriyadda.
Si aan u noqono aragti dhab ah waa in aan male-awaalkeena ku salaynaa xaqiiqadeena la taaban karo innagoo isla markaaba male-awaal ku samaynayna fursadaha ka baxsan xaqiiqadaas.
Waxaan fasalka soo galay aniga oo ku qanacsan in ay muhiim u tahay aniga iyo arday kasta oo kale in aan noqono ka qaybqaatayaal firfircoon, ma aha isticmaale dabacsan ... waxbarashada sida ku dhaqanka xorriyadda .... waxbarashada xiriirisa rabitaanka si loo ogaado rabitaanka inaad noqotid. Barashadu waa meel jannada laga abuuri karo.
Rajadaydu waxay ka soo baxdaa goobaha halganka ee aan markhaati ka ahay shakhsiyaadka si togan u beddelaya noloshooda iyo adduunka ku xeeran. Waxbarashadu waa xirfad ku qotonta rajo- rajo. Macallimiinta waxaan aaminsanahay in wax-barashadu ay suurtagal tahay, in aysan jirin wax maskaxda furan ka ilaalin kara raadinta aqoonta iyo raadinta hab lagu ogaado.
Dhammaanteena ku jirta akadeemiyada iyo dhaqanka guud ahaan waxaa loogu yeeraa inaan dib u cusboonaysiinno maskaxdeena haddii aan dooneyno inaan wax ka bedelno hay'adaha waxbarashada - iyo bulshada - si habka aan u noolahay, wax u baro, iyo shaqada u muujino farxaddeena kala duwanaanshaha dhaqameed, our Jacaylka caddaaladda, iyo jacaylkayaga xorriyadda.
Si loo dhiso bulshadu waxay u baahan tahay wacyigelin feejigan oo ku saabsan shaqada ay tahay inaan si joogto ah u qabanno si aan u wiiqno dhammaan bulsho-weynta noo horseedaya inaan u dhaqmo siyaabaha sii waaraya xukunka.
Dadka aniga oo kale ah, waxa muhiimka ah oo muhiimka ah waa in la ilaaliyo waxbarashadaas miyir-qabka muhiimka ah ee agagaarka isgoysyada, si dadku u awoodaan in aysan diiradda saarin hal shay oo ay eedaan koox ka mid ah, laakiin ay awood u yeeshaan inay si buuxda u eegaan habka is-goysyadu u ogeysiiyo dhammaan anaga: cadaan, lab iyo dhedig, dookhyada galmoodka, iwm. Markaas oo keliya ayaanu si dhab ah u qabsan karnaa adduunka siyaasadeed iyo dhaqameed ee aynu ku dhex nool nahay.
Qoraha (yada) Betty Reardon
“Inta badan ... waxay isku raacsan yihiin inaysan jirin waxbarasho dhexdhexaad ah. Waxbarashadu waa shirkad bulsho oo loo sameeyo xaqiijinta qiyamka bulshada. Su’aashu waxay tahay waa maxay qiyamka ay tahay in lagu xaqiijiyo waxbarashada, iyo sidee ”.
"Ujeedada guud ee waxbarashada nabada, sidaan u fahmay, waa in kor loo qaado horumarka miyir-qabka dhabta ah ee noo sahlaya inaan u shaqeyno sidii muwaadiniin caalami ah oo aan u bedelno xaaladda aadanaha ee hadda jirta iyadoo la beddelayo qaab-dhismeedka bulshada iyo qaababka fikirka waa ay abuurtay. Isbadalkan waajibka ah waa in, sidaan u arko, uu udub dhexaad u yahay waxbarashada nabada. "
“Inaad ka fikirto sida dunidu noqon karto iyo in la odoroso bulsho cadaalad ku sifowday ayaa ah nuxurka fikirka laga qabo xaaladaha ka kooban nabadda wanaagsan. Haddii aan rabno inaan wax u barano nabadda, macallimiinta iyo ardayda labadaba waxay u baahan yihiin inay lahaadaan fikrad wax ku ool ah oo ku saabsan adduunka is beddelay ee aan wax u baraneyno. ”
Ujeedada ugu dambeysa ee waxbarashada nabada waa sameynta mas'uuliyad, daacadnimo, iyo daryeel muwaadiin kuwaas oo isku dhafay qiyamka nolol maalmeedka isla markaana helay xirfado ay ugu doodaan iyaga.
"Haddii aan u doodno qiimaha iyo sharafta dadka oo dhan, waxaan u baahanahay sidoo kale inaan aqbalno khaladaadkooda iyo sidoo kale hadiyadohooda iyo hibooyinkooda, isla markaana aan fahanno in dhammaanteen (xitaa nafteenuba) ay karti u leeyihiin inay wax beddelaan. Su'aashu waxay tahay ma inaa la dhiirrigelin doonaa Aniga waxaan aaminsanahay in dhiira galintan ay tahay howsha ugu horeysa ee waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada nabada.
"Waa maxay qeexitaanka guud ee waxbarashada nabadda aan bixin karno marka laga barto barashada, iyo ka shaqeynta iyo kakanaanta, si kor loogu qaado taajirnimada iyo kala duwanaanta nolosha?"
Qoraha (yada) Chintan Girish Modi
"Muhiimadda salka ku haysa waxbarashada nabadda waxay tahay fahamka rabshadaha, iyo sahaminta waxyaabaha kale ee rabshadaha. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in rabshaduhu aysan ku koobnayn waxyeello jireed laakiin ay sidoo kale ku jiraan waxyeelo nafsi ah, xadgudub shucuureed, takoorid, ka reebitaan, diidmada fursadaha, dhiig-miirashada, dambi ka dhigista aqoonsiga, iwm. Rabshaduhu waa qayb ka mid ah waaqicayaga maalinlaha ah. "
Qoraha (yada) Colman McCarthy
Ilaa aynaan barayno carruurteenna nabadda, qof kale ayaa baraya rabshadaha.
Qoraha (yada) Daisaku Ikeda
"Waa inay waxbarashadu kobciso caqliga diidmada iyo iska caabinta rabshadaha noocyadeeda kala duwan. Waa inay kobcisaa dadka si caqli gal ah u fahma oo u ogaada - maskaxdooda, qalbiyadooda, iyo jiritaankooda oo dhan - qiimaha lama beddeli karo ee aadanaha iyo kan dabiiciga ah Waxaan aaminsanahay in waxbarashadan oo kale ay xambaarsan tahay halgankii aan waqtiga lahayn ee ilbaxnimada aadanaha si loo abuuro waddo aan nabada lahayn.
Qoraha (yada) Dale T. Snauwaert
"Nabadda waxbarashadu waxay ku saleysan tahay aaminaadda guud ee ah in bulshada anshaxa ay ka mid yihiin aadanaha oo dhan, in dhammaan aadanaha ay leeyihiin mowqif akhlaaqeed, sidaas darteedna dagaalka iyo nabadda, caddaaladda iyo caddaalad darrada, waa tixgelinno xagga akhlaaqda adduunka ah.
Qoraha (yada) David Hicks
“Aragtida mustaqbalka ayaa muhiim u ah barista iyo barashada wax ku oolka ah ee waxbarashada nabadda. Iyagoo awood u siinaya bartayaasha inay ka fikiraan si xeel dheer iyo hal abuur leh xoogagga abuuraya mustaqbal macquul ah iyo kuwa la doorbido, waxay awoodaan inay ku lug yeeshaan ficil ujeeddo leh oo diiradda la saarayo isbedelka. ”
Qoraha (yada) Deborah Meier
Waxbariddu inta badan waa dhageysi, barashaduna badanaa wax bay sheegaysaa.
Qoraha (yada) Derek Lough
"Waxbarashada cadaaladda bulshada waxay dooneysaa inay ka dhaadhiciso kuwa ku nool labada dhinac ee tusaalaha dulmiga saxda ah ee xaaladooda iyadoo loo marayo dhageysiga qoto dheer ee waaya-aragnimada nool ee 'kuwa kale' iyo is-milicsiga muhiimka ah, ka dibna waxay dhiirrigelineysaa isbeddellada ficilada hadda wixii ka dambeeya ee dulmiga ilaa ka soo horjeedka - cadaadis.